Mafirimu uye akateedzana online paLinux nekuda kweNetflix | Linux Vakapindwa muropa
Netflix, iyo inozivikanwa sevhisi yekutarisa mafirimu uye akateedzana mukuyerera kuburikidza neiyo Chrome browser, yave kuwanikwa kuLinux. Netflix yasvika paUbuntu kuitira kuti vashandisi vayo vagone kunyorera kune ino yepamhepo vhidhiyo sevhisi.
Netflix inoda iyo vhezheni ye Ubuntu ive 12.04 kana yakakwira uye iyo bhurawuza vhezheni inofanira kunge iri Chrome 37 kana kupfuura. Nhau dzakanaka dzevashandisi veLinux, nekuti kusvika parizvino Netflix yakanga yakanganwa Linux uye haina kupa rutsigiro rwepamutemo pachikuva.
Izvi zvakamanikidza vashandisi kutendeukira kumatekinoroji matipi kuti vatenderedze chipingamupinyi uye vagone kushandisa Netflix paLinux, asi kubva zvino zvichienda hazvizove zvakafanira kunetsa. Uye shanduko kana danho rakadzingwa zvese kubva mukati meNetflix uye kubva zvinonzwisisika, iwe unoda kuona yako system ichikura uye uine yakawanda uye yakawanda rutsigiro.
Kune avo vasingazive Netflix, ipuratifomu yeAmerica inovhara pasi rese kuona mafirimu uye akateedzana online nehunhu hwakanaka. Kune izvi, masevhisi ayo anogona kuwanikwa nekubhadhara yakadzika pamwedzi mubhadharo. Netflix zvakare inobvumidza seDVD-ne-mail sevhisi kuburikidza nePermit Reply Mail.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Netflix inowanikwa yeUbuntu
Handeyi!!!! Yakanaka, uye tinoramba tichiwedzera.